जहाँ विहे अघि यौ’न स’म्पर्क नगरुन भनेर युवतीको यो’नी सिलाईन्छ ! – ताजा समाचार
पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन। जसको परम्परा र सभ्यता पनि फरक फरक हुन्छ। ती मध्ये कतिपय स्थानमा युवतीहरुलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिन्छ। पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको यो’नी सिलाइदिन्छन्। छोरी मान्छेले विवाह अगाडि यौ’न स’म्पर्क नगरुन भनेर उनीहरुको यो’नी सिलाइन्छ।
काठमाडौं‌मा भयो यस्तो अनौठो घटना ! हरेक रात अञ्जली यसो गर्छिन, डराए छिमेकीहरु हेर्नुहोस तलको भिडियोबाट ।
विवाह गरेपछि सिलाइएको यो’नी खोलिदने चलन छ। परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने यो अमान’वीय व्यवहार अहिले पनि जािरी छ। यसरी यो’नी सिलाउँदा युवती विभिन्न रो’गको सिकार हुने गरेका छन्।
त्यस्तै अफ्रिकाकै घानामा एक परम्पराका अनुसार विधवा महिलाको आत्मा शुद्धीका लागि भन्दै पर’पुरु’षसँग रात वि’ताउनु पर्ने चलन छ। विधवा महिलाले पर’पुरुषसँग रात बि’ताउने क्रममा आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण राख्न सके उनको आत्म पवित्र हुने विश्वास गरिन्छ।
क्यामरुन, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाको केही भागमा युवतीको स्त’नमा तातो ढं’गाले आइरन गरिन्छ। युवतीको स्त’न ठूलो हुनबाट रोक्न उनीहरुको स्त’नमा ता’तो ढुंगाले आइरन गरिन्छ। स्त’नमा तातो ढुंगाले आइरन गर्दा महिला परपुरुषमाथि कम ध्यान दिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ।